फेरि नेटवर्किङ धन्दा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
फेरि नेटवर्किङ धन्दा
स्थान : सिद्धार्थ फुडल्यान्डको हल, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
समय : आइतबार बेलुकी ९ बजे
ठूलो हलको पारदर्शी सिसाका झ्यालभरि पत्रिका टाँसिएको छ, ताकि बाहिरबाट हेर्दा हलभित्रको वातावरण नदेखियोस् । हङकङ, मलेसिया र भारतको बैंग्लोरबाट अनलाइन सम्पर्कमा आएका प्रशिक्षकहरू हलको अग्रभागको ल्यापटपमा देखिइरहेका थिए । २९ युवतीसहित १ सय २ जना ठूलो प्रोजेक्टरमा तिनै प्रशिक्षकहरूका कुरा सुनिरहेका थिए ।
अचानक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारी हलभित्र छिरे । ‘सबै चुपचाप आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोला । हामी प्रहरी हौं । तपार्इंहरूलाई चारैतिरबाट घेरा हालिएको छ’ भन्नासाथ हलमा रहेका सबै चलमलाउन थाले । के भएको हो ? के हुँदै छ ? कसैले मेलोमेसो पाइरहेका थिएनन् । एउटा ठूलो बस र हायस गाडीमा कोचाकच गरेर त्यतिका धेरै मान्छेलाई पक्राउ गरेर महाराजगन्जस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कार्यालयमा ल्याइपुर्‍याउँदा रातको साढे दस भइसकेको थियो । लाइन लगाएर पक्राउ परेकाहरूको प्रारम्भिक बयान लिँदा ब्युरोको आँगन भरिभराउ देखिन्थ्यो ।
ब्युरोका स–साना कोठामा नअट्ने भएपछि २९ युवतीलाई ब्युरोमै राखियो भने अन्यलाई काठमाडौं परिसर टेकु पुर्‍याइयो । प्रारम्भिक बयान सकेर परिसरमा पुर्‍याउँदा बिहानको तीन बजिसकेको थियो । सबैले भय, त्रास र छटपटीमै अनिँदै रात बिताए । पक्राउ परेका सबैलाई थप बयानका लागि बिहान नौ बजे ब्युरो ल्याइएको थियो ।
यसरी पक्राउ परेका सबै जना नेपालको कानुनले गैरकानुनी ठहर्‍याएको नेटवर्किङ धन्दामा सामेल थिए । अनलाइनमार्फत चलाइने विवादित अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्यु नेट’ नेटवर्कको सदस्य बनेकाहरूलाई अरू सदस्य कसरी बनाउने ? नयाँ सदस्य बनाएबापत कसरी कमिसन पाइन्छ र कसरी नेटवर्क विस्तार गर्ने भन्नेबारे त्यो हलमा तालिम दिइएको थियो । प्रहरीका अनुसार अनलाइनमार्फत विभिन्न व्यक्तिहरूको गिरोहले पछिल्ला डेढ वर्षयता गुपचुप रूपमा नेपालभित्र सञ्जाल फैलाइरहेका थिए ।
यसरी सदस्य बन्नेहरूलाई सुटुक्क विभिन्न होटलहरूमा जम्मा पारेर साताको दुई पटक अनलाइन र अफलाइन तालिम दिइन्थ्यो । प्रहरीका अनुसार कहिले विदेशबाटै अनलाइन तालिम दिइन्थ्यो भने कहिले विदेशीहरू तालिम दिनकै लागि नेपाल आउँथे । सदस्यहरूलाई छोटो समयमा मनग्गे पैसा कमाउन सकिनेलगायत प्रलोभन देखाइन्थ्यो ।
धनगढी घर बताउने हरि जोशीलाई चिनेजानेकै साथीले क्यु नेटबारे बताए । ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेपछि सदस्य बन्न सकिने र त्यसपछि अन्य नयाँ सदस्य बनाउँदै गएपछि कमिसन बढ्दै जाने थाहा पाएपछि उनी यो सञ्जालमा छिरे । सदस्यबापतको पैसा भने उनले काठमाडौंको एक होटलमा त्यसका एजेन्टलाई नगदै बुझाएका थिए ।
सदस्य बनेपछि उनले क्यु नेटको अनलाइन खाताको युजर आईडी र पासकोड पाएका थिए । जोशीले नयाँ सदस्य बनाएपछि त्यसबापत आउने कमिसन रकमको हिसाबकिताब त्यही अनलाइन एकाउन्टमा हेर्न मिल्थ्यो । साथै, नेटवर्क चलाउने गिरोहले ल्याउने नयाँ–नयाँ स्किमबारे पनि अनलाइनमार्फत नै जानकारी गराइन्थ्यो । अन्य सदस्य जस्तै जोशी पनि प्रत्येक आइतबार र बुधबार दिइने तालिममा सहभागी हुँदा पक्राउ परेका थिए ।
क्यु नेटका सदस्यहरूले इष्टमित्र, आफन्त, साथीहरू वा अफिसका सहकर्मीलाई गोप्य रूपमा विभिन्न क्याफे तथा रेस्टुरेन्टमा बोलाउँथे । क्यु नेटसम्बन्धी काउन्सिलिङ दिन्थे र सदस्य बने महिनाको १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सकिने प्रलोभन देखाउँथे ।
३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर सदस्य बनेपछि प्रोडक्ट बाइङ अथवा टुर प्याकेज छानेर लिन पाइन्थ्यो । यसरी सदस्य बनेकाले अर्को दुई नयाँ सदस्य थप्यो भने ४ सय डलर अर्थात् ४० हजार रुपैयाँजति कमिसन दिइन्थ्यो । प्रत्येक सदस्यले कम्तीमा दुई सदस्य बनाउनैपर्ने नियम बनाइएको थियो । यसअघि अवैध घोषित भएर बन्द भएका गोल्ड क्वेस्ट र युनिटीजस्तै यसमा पनि धेरैभन्दा धेरै सदस्य बनाउनेले धेरैभन्दा धेरै कमिसन पाउने नियम बनाइएको थियो ।
धेरै पैसा तिरेर नम्बर बटुल्न पाइने नियम पनि क्यु नेटले बनाएको थियो । ५ यूबी शीर्षकको प्याकेज पाउन ३५ सय डलर तिर्न सकिने नियम बनाइएको थियो भने ५ हजार डलर तिरे ७ यूबी शीर्षकको प्याकेज पाइन्थ्यो । जति धेरै पैसा तिर्‍यो, उति उपल्लो नम्बर पाइने र त्यसैका आधारमा विश्वका विभिन्न देशका सुपरमार्केटमा किनमेल गर्दा छुट पाइने र नयाँ सदस्य बनाउँदा धेरै कमिसन पाइनेलगायत विशेष अफर थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्यु नेटको अवैध सञ्जालमा कति नेपाली सदस्य बनिसकेका छन् र कति रुपैयाँ फसेको छ भनेर हिसाब निकालिसकेको छैन ।
ब्युरोका एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले थप अनुसन्धान चलिरहेको र त्यसबारे विस्तृत जानकारी केही दिनमै पाइने बताए । प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये धेरैजसो व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षक तथा विभिन्न बैंकका कर्मचारी छन् । प्रहरीले पक्राउ परेकामध्ये नेटवर्क विस्तारमा सक्रिय १४ जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रकृति बुढाथोकी, श्वेता बस्नेत, सिर्जना सिंह, अंकिता श्रेष्ठ, विकल्प श्रेष्ठ, क्षितिज पौडेल, नरेश मल्ल, ओम गुरुङ, विशन गुरुङ, किरण जोशी, सुमित मानन्धर, सौरभ गोयन्का, सुमित श्रेष्ठ र प्रमेश मानन्धरलाई पक्राउ म्याद थपेर अनुसन्धानका निम्ति थुनामा राख्ने भएको छ ।
ब्युरोका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये सबैभन्दा सक्रिय र उपल्लो हैसियतमा काठमाडौंका सुमित श्रेष्ठ, सुमित मानन्धर, सौरभ गोयन्का र प्रमेश मानन्धर छन् । पछिल्लो डेढ वर्षमा सुमितले यही सञ्जाल विस्तार गरेर ५१ हजार ७ सय डलर आम्दानी गरेको उनको अनलाइन एकाउन्टमा देखिन्छ । त्यस्तै, प्रमेशको खातामा १० हजार डलर आम्दानीको रकम देखिन्छ । पक्राउ परेकाहरू अधिकांश गतिलो शैक्षिक पृष्ठभूमिका देखिन्छन् । प्रहरीका अनुसार सुुमित श्रेष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् भने गोयन्का एमबीए गरेका विद्यार्थी ।
ब्युरोका अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ परेका सबैको एकाउन्ट आईडी र पासकोड लिएर रातभर उनीहरूको खातामा रहेको रकम र कारोबारको प्रकृति हेर्ने प्रयास गरेको थियो । स्रोतका अनुसार एकैचोटि धेरै सदस्य पक्राउ परेको खबर हङकङस्थित मुख्यालयमा पुग्नेबित्तिकै उसले आफ्ना सदस्यहरूको खातासम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न खाता बन्द गरिदिएको थियो । त्यसैले ब्युरोले केही सदस्यहरूको मात्रै आम्दानी र कारोबारसम्बन्धी विवरण फेला पारेको थियो । नेपाल सरकारले २०६६ माघ १६ गते नेटवर्क मार्केटिङलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । जुन २०६७ जेठ १० गते खारेज गरिएको थियो । २०६८ चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतले नेटवर्क व्यवसाय नगर्नू/नगराउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।
के हो क्यु नेट ?
सन् १९९८ मा अस्तित्वमा आएको यो नेटवर्किङ कम्पनी १ सय ८० देशमा फैलिएको छ । स्थापनाकालमा यसको नाम क्वेस्ट नेट थियो । कालान्तरमा गोल्ड क्वेस्ट, क्यु आई लिमिटेडजस्ता नामबाट पनि यसले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको थियो । हङकङमा कर्पोरेट अफिस र मलेसियामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यसले कैयौं देशमा अवैध रूपमा लुकीछिपी आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ भने केही देशमा यसले वैधानिक हैसियतमै आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ । पिरामिड आकारको सञ्जालमा विस्तार हुने क्यु नेट यसअघिका अवैध नेटवर्क व्यवसाय युनिटी र गोल्ड क्वेस्टकै शैलीमा विस्तार हुने गर्छ ।
डलरमा कारोबार हुने भएकाले क्यु नेटमा अधिकांश पढेलेखेका र गतिलो पेसा व्यवसायमा लागेकाहरू जोडिएका छन् । भारतमा पनि विस्तार भएको क्यु नेटलाई अदालतले नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतमा पाँच लाख जना यसका सदस्य थिए ।
क्यु नेटलाई सन् २००५ मा श्रीलंका र इरानमा, सन् २००८ मा अमेरिका र क्यानडामा, सन् २००९ मा सुडानमा र सन् २०१० मा भारत र साउदी अरबमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । क्यु नेटको मातृ संस्था गोल्ड क्वेस्टलाई नेपाल सरकारले सन् २००३ मै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले गोल्ड क्वेस्टको सञ्जाललाई पूर्णतया ठगीको जञ्जाल रहेको बताएको थियो । इन्डोनेसियाका फाइनान्सियल सर्भिस अथोरिटीले यही जनवरीमा क्यु नेटलाई गैरकानुनी कम्पनीको सूचीमा राखेको थियो ।
आर्थिक रूपमा अर्बौं डलरको धनी मानिने यो कम्पनी एसिएन फुटबल कन्फिडेरेसन अर्थात् एफसी च्याम्पिनस लिगको सन् २००९ देखि २०१२ सम्मको सिजनमा प्रमुख सहयोगी संस्था बनेको थियो । यसका अलावा कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा क्यु नेट प्रायोजक बनेको छ । हङकङ फुटबल क्लब र बहराइनको बास्केटबल क्लबको पनि प्रमुख प्रायोजक क्यु नेट हो ।